Quful terminal-kaaga oo ilaali waxaad ku sameyso vlock | Laga soo bilaabo Linux
Way igu dhacday marar badan inaan ka shaqeeyo terminalka laptop-kayga isla waqtigaas saxda ah waxay iga codsadaan xafiis kale, ama waxaan haystaa 'wax' wax ku qabanaya terminal iyo dardaaran ama daruuri waa inaan u ogolaadaa saaxiibkay inuu isticmaalo dhowr daqiiqado laptop-kayga, kiisaska sidan oo kale ah ... Sideen u ilaaliyaa waxa aan ku sameeyo terminaalka anigoon gabi ahaanba ka hor istaagin fadhiga isticmaalaha?
Nasiib wanaag baakadka ayaa jira: vlock
Ku rakib xirmadan nidaamkaaga ka dibna ku sii wado terminal (vlock), Waxay arki doonaan in terminaalka la xiray / la ilaaliyay ilaa ay ka riixayaan [Enter] oo ay galayaan lambarka sirta ah, tani way sii socon doontaa 😉
Haddii aad rabto inaad aragto qormada tilmaamaysa isku daygii dhicisoobay, isku daygii galitaanka ee lagu guulaystay iyo in ka badan, waa inaad bisad ku samaysaa faylka /var/log/auth.log oo u sii gudbinaya sidii halbeegga dufan "Vlock"
Tani waa tilmaam fudud oo haa ah, laakiin mar hore ayay faa'iido ii ahayd aniga ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Quful terminal oo ilaali waxa aad ku samayn vlock
Barnaamijka +1 waa mid aad u xiiso badan, inkasta oo aanan u arkin inuu waxtar u leeyahay xaalad sida kan aad sheegaysid oo kale, maxaa yeelay si aad u fuliso amarro muhiim ah waxaad u baahan tahay xididka xididka haddii ay sidaas ku dhaafaanna adigaa gacantaada ku jira xq leh ctrl + alt + f1 ama f2 iwm waxay furaan tty waxayna ku galaan asal ahaan waxayna yeeshaan isla dhaawac.
Intaa waxaa dheer, amarrada laga heli karo terminaalka sidii isticmaale caadi ah, tiro badan oo kiisas ah, waxaa looga heli karaa barnaamijyo. Xaqiiqda ah in Akhriso, nuqul ka sameyso, tirtirto feylasha, xitaa waxaad ku ridi kartaa autostart-ka xiriiriye barnaamij basaas oo ku qarsoon guriga gudihiisa taasina waxay fureysaa markasta oo aad bilowdo kulanka, waxyaabo badan.
Waxay ila tahay in barnaamijku ka badan yahay wax kasta oo laga fiirsado, waayo markii dhowr kumbuyuutar la maamulo oo dadka isticmaala ee aan la rabin inay awood u yeeshaan inay helaan marin ay ku darsadaan dhimista tirada tty terminals, haddii barnaamijkan sidoo kale iyaga xannibo .
Waan kuugu raacsanahay. Taasi kama hor istaageyso furitaanka xarun kale. Oo hadaad rabto inaad aragto waxa kale ee uu fulinayay kahor kahor markaa waxaan arkaa faylka ~ / .bash_history (ama lamid ah waxay kuxirantahay distro)
In kasta oo ay tahay xirmo xiiso leh haddana waxaan u maleynayaa inay fiicantahay in la joojiyo fadhiga.
waxay umuuqataa mid waxtar leh, in kasta oo aan wali u arko in sifiican loo xannibayo fadhiga ... haddii waxa aad haysaa ay yihiin cabsi laga qabo inaad lumiso kulankaaga bash waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho shaashadda GNU. Hadaad kuhesho doodaha "shaashad -D -R" waxaad marwalba galeysaa isla casharka, uga bax adiga oo adeegsanaya kumbuyuutarka "Ctrl + a" iyo "d" (taasi waa, horta waxaad sameysaa Ctrl + a ka dibna waxaad riixdaa "d »), Marka waxaad u sheegaysaa barnaamijka inuu kalfadhiga ka dhigo mid furan asalka.
PS: tani waxaa loogu talagalay oo keliya isticmaalaha isku dayaya inuu adeegsado terminaalkeena kullankeenna suuban, sax? .. Waxa kale oo suuragal noqon karta in la xakameeyo qolofka marka la abuurayo isticmaale ama wax laga beddelayo kuwa jira!
Xitaa sidaas oo ay tahay, waad ku qanacsan tahay!
Aynu aragno, waxaa loo maleynayaa in si loo furo terminal kale waa inaad gashaa username iyo password.
Kaladuwan ayaa ah inaan ku hoos jirno jawiga garaafka oo aan fulinno xterm ama wax kale.
Wax badan ayaan sharad ku geli lahaa codsi xannibaya kombiyuutarka oo dhan, oo ay ku jiraan X.
Waan furayaa kumbuyuutarka oo aan wataa 😛
Waxay noqon kartaa mid faa iido leh marka qofku uusan isticmaalin jawiga garaafka oo uu kujiro tty isagoo ciyaaraya chess ama tweeting, markaa iyagu wax faragelin ah kuguma sameyn doonaan adiguna waxaad sii wadi doontaa taada.
Ma awoodi kartid Alejandro, waxaan xasuustaa markii kormeerayaasha fosfoorada cagaaran ay jireen oo ay ahaayeen kuwo aan la cabi karin, indhaha ayay ka dhalaaliyeen, taasi waa sababta ay markii dambe ugu beddeleen amber oo markii dambena loo beddelay monochromatic.
Adiguna waxaad ku dartay asalkaas xarfaha buuxa, waad khaldantahay! Hahaha !!! 😀
Sida vlock, u fiirso in uu jiro fargeeto wanaagsan oo loo yaqaan 'vlock-matrix' taas oo si cad kuu tusinaysa xarfaha xarfaha markay shaashadda xirto.
Cascade-kan ayaa loo qaabeyn karaa iyadoo loo eegayo jilayaasha aad rabto inaad soo muuqato, midabka, iwm. Khasaaraha kaliya ee ay leedahay iyo sababta aanan u isticmaalin waa in ay u muuqato in saameynta "matrixka" ay aad u isticmaasho processor aad u badan dhadhankeyga.
Hal shay oo dheeri ah: vlock runtii waxtar ayey leedahay marka aan ka shaqeyno ttys maxaa yeelay waxaan uga tagi karnaa nidaamka socda asalka oo xiraya boosteejada iyo HELITAANKA inta ka hartay waqtiga kale, oo ay ku jiraan 6, 7 iyo 8 iyo wixii ka dambeeya guud ahaan xakamaynta kooxda.
HAHAHAHAHAHA waa inaan ka jeclahay midabada dhalaalaya sida midda ku jirta terminalka, bal qiyaas ... 😀
Xiiso badan oo ku saabsan fargeetada 😉
Waxaan arkaa in laga bilaabo tty (xej: crtl + alt + f1) aad ku soo gasho sidii isticmaale ama xidid iyo vlock -a waxay xireysaa dhamaan tty oo xitaa ma geli kartid fadhiga (ctrl + alt + f7) haddii ay sidaas tahay ayaa ka fiicnaan lahayd ka hortagga kal-fadhiga.
Dabcan, haddii aad vlock ka socoto kalfadhiga garaafka waa dambi la'aan
Si daacad ah uma arko wax faa iido ah
Saamayntiisu waxay lamid tahay amarka «bixitaanka» maadaama wixii markaa ka dambeeya tb uu kaa codsanayo inaad gasho, xitaa sidaas oo ay tahay, qof kastaa wuu beddeli karaa
Waxaan kaga jawaabayaa wixii aan akhriyay intaanan duubin
tani runti waxtar ayey leedahay, waan fiirsanayaa
Ma aanan ogeyn inay jirto, kaliya tipie vlock oo wuu xannibmay, mahadsanid !! 😀
Bal waxyar ka fikir: Waxaan kalfadhigeyga u furanyahay adeegsadeheyga, asal ahaan xidid maleh, waxaan rabaa inaan xayiro terminaal leh xidid marin, ama tusaale ahaan waxaan rabaa inaan xayiro terminal leh ssh mashiin kale, saaxiibkay wuxuu rabaa inuu isticmaalo kumbuyuutarka si uu u maro laakiin ma doonayo inaan ku dhammeeyo terminaalkaas ssh ama xidid, maxaa yeelay waxaan isticmaalaa vlock, midka aysan u arkin inay waxtar leedahay ayaa ah inaysan lahayn mala-awaal fara badan, ha, dhibaatooyinka waxay ka dhashaan danteenna, shakikeenna, laakiin haddii aysan taasi jirin markaa waan goynay.
Iga raali noqo, miyuu jiraa qof u isticmaalay Ubuntu? .. Waxaan ku qoraa vlock-ka terminal-ka oo markaan riixo [Gali] furitaanka terminalkeyga waxay i siineysaa qalad xitaa haddii aan si sax ah u qoro furaha ereyga, fur fur si aan wax uga beddelo xarriiq kasta oo loogu talagalay qaabeynta ama wax?
HAHA, WAAD LEEDAHAY !!!
Ma ogtahay in JINSIYADA loo yaqaan 'Canonical' ay go'aansadeen waqti hore in soo ifbaxa qalabka SUDO ay doqonimo tahay in xididku yeesho eraygiisa sirta ah, maadaama sidan oo kale ay "u baabi'inayaan" vector weerar ka dhan ah?
Sidan oo dhan Ubuntus waxaa lagu sii daayaa koontada asalka u ah 'DISABLED', taas oo ah, iyada oo aan lahayn lambarka sirta ah.
Markaad sameyso xisaabta aasaasiga ah waxaad awoodi doontaa inaad ogaato in haddii VLOCK la shaqeeyo xididka xididka laakiin xididka dhaafo OH, MA JIRTO !!! markaa waa wax aan macquul aheyn inaad dib-u-gasho nidaamka XDD
Waxaad haysataa laba ikhtiyaar: ama isticmaal qaybinta kale ee loo maareeyay qaab kale ama u sameyso eray sir ah isticmaaleha asalka u ah sida qaybinta badankeedu aysan u qarin nidaamka aasaasiga ah isticmaalaha.
Diyaar, hadda waad isticmaali kartaa VLOCK in kastoo dabcan, tani waxay ka hor imaaneysaa naqshadeynta Ubuntu, wax la mid ah ku darista keydka kombiyuutarka la cusbooneysiiyay iyo kernels-ka Debian * cof *
xDDD Markii aan isticmaalay Ubuntu waxa ugu horreeya ee aan qabtay waxay ahayd furitaanka terminal oo waxaan dhigay:
Sababtoo ah haddii adeegsadehaygu i raray, sidee cadaab u ahay inaan u maareeyo nidaamkayga? xDDD
Ma ogtahay inaad kuheli karto DesdeLinux emailkaaga?